ACDSEE VIDEO CONVERTER | DKMXXX.COM
INTERNET DOWNLOAD MANAGER FOR DOWNLOAD MOVIES
Fast, easy video conversion
acdVIDEO Converter2isasimple to use HD video converter that can quickly and easily convert video files between most popular media formats (even M2TS Blu-ray) for high quality playback on your mobile device, including the iPhone4S. Its smart video aspect ratio clipping algorithm helps you make full use of your mobile media player screen. You can also use it to extract your favorite MP3 audio from downloaded video files. Use the exclusive Pro Tools Pane to get more from your converted video: adjust the volume of your output file, create still images, clip your favourite segments and more!
Designed to convert videos for your mobile media player, acdVIDEO
Converter2lets you createato-do list of videos to convert, and set the program to shut down after conversion is completed, or pause/re-start the conversion at your convenience.
Convert between all kinds of video and audio formats, including AVI, MP4, MKV, FLV, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MPG, PSP, M4V, VCD, DVD, ARM, ASF, AVS, SWF, MPEG, MTV, OGG, H261, H263, H264, MP3 and more.
Now includes M2TS Blu-Ray!
AVI MP4 MKV FLV 3GP 3G2 WMV MOV VOB MPG PSP M4V VCD DVD ARM ASF
AVS SWF MPEG MTV OGG H261 H263 H264 RM VID BFI C93 DRC DNXHD DSICIN DV DIF DXA EA FFM FLIC V4L GXF CIN CGI MVE LMLM4 LIBDC1394 NUT MJPEG M1V M2V M2T M2TS MVI MXF V NSV NUV OGV V4L2 RCV VMD PVA R3D YUV CIF GCIF RGB
RL2 ROQ RPL CPK VB SON SMK STR THP SEQ TXD VC1 4XM VFM WC3 VQA Y4M
AVI WMV MP4 3GP FLV MOV ASF M4V MKV DV MPEG1 MPEG2 VOB WMA MP3
Just follow three simple steps to convert your videos quickly and easily:
Click the "Add" button and locate your video file.
Click the "Choose Format…" button.
Click the "Start" button and start converting!
When input video aspect ratio does not match the output profile screen aspect ratio, acdVIDEO Converter2can automatically clip the edges of the input video to make full use of your device’s screen.
Easily extract the audio from your favourite music videos for your listening enjoyment. acdVIDEO Converter2can convert your favorite video downloaded from the Internet to an audio format including MP3 or WMA for your iPod.
Designed for Portable Media Devices
Put acdVIDEO Converter2to work right away with pre-defined output profiles for all kinds of portable media devices including iPod, iPhone (now including the iPhone 4S), PSP, Zune; mobile phones including
Google Nexus One, BlackBerry and Nokia; and game consoles including PS3
Fully customizable output profiles
Fine-tune output profiles and store them as user-defined profiles by choosing and customizing frame size, video bitrate, audio bitrate and more. Your outputs will be properly configured for your device, every time.
Do more with your videos
acdVIDEO Converter2Pro's exclusive Pro Tools Pane lets you get more from your videos.
In the Pro Tools Pane you can:
See previews of your videos
Create your own movie stills by savingajpg or bmp freezeframe from your video
Clip your videos to extract the highlights
CLICK HERE TO DOWNLOAD HERE acd see converter pro full version ဒီကိုကလစ်ပါ
Myanmar Disaster | Information Sharing
Upper Myanmar Network
09 256033156 ဒေါ်သန္တာစိုး 09 444015073 မဝင်းအေး 09 792135594 နန်းဇင်ဇာဖြိုးသန့် 09 402537385 ကိုဝင်းငြိမ်း 09 400008215 လွေဦး(ကြယ်စင်)
Zay Ye Htut White Leaf Organization မှ ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူ ခံခြင်း-ကျွန်တေ်ာတို့ White Leaf Org မှလူငယ်များအနေနဲ့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက်မိမိတို့တက်စွမ်းသမျှအင်အားဖြင့်ကူညီသွားဖို့ရှိရာပါတယ်ခင်ဗျ ထို့ရာတွင်ငွေကြေးအခက်အခဲနဲ့ လှူ ဖွယ်ပစ္စည်များမှာ နဲပါးနေသေးပါသဖြင့် စေနာရှင်များ၏ အကူအညီများနှင့်အခြားအဆက်အသွယ်များကို အရေးကြီးစွာလိုအပ်နေပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့ Organiation မှ အလှူ ခံ၍ရလာသော ငွေကြေးများအား စားသောက်ကုန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများဝယ်ယူ၍ လေကြောင်းအကူအညီတစ်ခုဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ ကုန်းလမ်းများသွားလာ၍ရလာလျှင်မိမိတ်ုိ့ကိုယ်တိုင် လူအားဖြင့်ပါဒုက္ခသည်များရှိရာသို့သွာရောက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသည် ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့လှူ ဒါန်းချင်သည့် ပစ္စည်နှင့်ငွေကြေးများအားနဲသည်များသည်မဆိုထားပါ ပါဝင်လှူ ဒါန်းကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ လာရောက်ယူပါဆိုလျှင်လဲ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်များမှကိုယ်တိုင်လာယူဖို့အသင့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့-Zay Ye Htut(09795370779)Khant Zawoo (09799866722)Thiha Htetnaing-(09421063148)အဝေးရောက်စေတနာရှင်များအတွက်ကတော့- White Leaf Organizationရဲ့ATM Cardဖြစ်တဲ့9503090000552228 AGD card016100100046210 UAE card ကိုငွေလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာFacebook Page - White Leaf Organiztionhttps://facebook.com/whiteleaforgamisationလာရောက်လှူဒါန်းနိုင်မည့်နေရာ- မဟာမြိုင်ကားမှတ်တိုင် အနီး Gusto International Collegeအလှူ ဒါန နည်းများမဆိုပါဝင်လှူ ဒါန်းနိုင်ကြပါစေ တဆင့် shareပေးချင်းဖြင့်ကူညီပါXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 . 8 . 2015 ရဲရဲတောက် ပရဟိတ လူငယ်အဖွဲ့မှ မကွေးတိုင်း၊ မင်းဘူးခရိုင် ၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ငွေနှင့် အဝတ်အစားများအား စေတနာရှင်များပါဝင် လှုဒါန်းရန် အတွက် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ကောက်ခံရရှိလာသောအလှုငွေများအာိးုနိုင်ငံအဝှမ်းရှိရေဘေးသင့်နေသော ဒေသများသို့ အလျဉ်းသင့်သလို လှုဒါန်းသွားပါမည်။ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုသူများသည် Sai Myat Thu @ Kyal Wun Wunn PH-09258 305610 -09799787682 မယ်မင်းကြီးမဇဇ PH-09-973272757 သို့ ဆက်သွယ်၍ သော်၎င်း… Ma Myint Marr မမြင့်မား PH 09 - 254 357784 bank acc 098-301-09800903501 KBZ - လှည်းတန်းဘဏ်ခွဲ သ်ို့ တိုက်ရိုက် ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ၎င်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ရဲရဲတောက် ပရဟိတ လူငယ်အဖွဲ့XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXကျွန်တော်တို့ BODN ( Burma Online Democratic Network ) ========================================= ရဲ့ရေဘေးသင့်သူများအားကူညီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ.. ===================================== (28.7.2015) မအူပင်မြို့ကနေ အသင်းအဖွဲ့ ၁၈ခု လုပ်လိုက်တယ် ။ အနည်းဆုံး ၁ သင်း ကို ၁ သိန်း အလှုဝိုင်းခံပေးပါဖို့အတွက် တိုင်ပင်ကြတယ် ။ ချစ်သ္မီး@ချောစန္ဒီထွန်း ကနေ BODN (Burma Online Democratic Network) ဆိုတဲ့ ဂရုတစ်ခုအတွက် တာဝန်ယူပြီး အလှုငွေ ကောက်ခံပေးပါတယ် ။ မေတ္တာရှင်ဂရုက ကယ်ဆယ်ရေးသွားဖို့အတွက် ကားစီစဉ်ပေးပါတယ် ။ ဆီလည်းကိုတော့ မြို့သူမြို့သားတွေဆီက အလှုခံပေးပါတယ် ။ စားဖို့သောက်ဖို့က ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်ပါ ။ အသွားအပြန် ၄ ရက်ကြာပါမယ် ။ မအူပင် ကြက်ခြေနီအသင်းကလည်း လိုအပ်တဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ လိုက်ပါလာပါမယ် ။ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းရန် ============ မချောစန္ဒီထွန်း KBZ ATM 999 307 999 341 36401 Phone - 0931527512 (( ကျေးဇူးပြု၍ငွေလွှဲပြီးတာနဲ့ဖုန်းဆက်ပေးပါ )) BODNမှကောက်ခံရရှိသော ရေဘေးအလှုငွေစာရင်း ============================== ဦးမောင်မောင်(ပုသိမ်) - 300000 Sheet Quse - 200000 ကိုထက်မြတ်သိန်း - 100000 ကြက်ဖကြီး - 50000 ကိုဇေယျာမင်းနိူင် - 50000 ကိုဝေယံနိူင် - 30000 မရွှေခိုင် - 30000 မအိမ့်ကြယ် - 30000 ကိုမျိုးကြီး(ဂျပန်) - 30000 ဦးဧရာ - 30000 မာမား - 30000 ကိုမျိုးချစ်သား - 10000 ကိုစော - 10000 ကိုမင်းနိူင် - 10000 မလဲ့လဲ့ထွန်း 10000 ချမ်းမြေ့ - 10000 မအူပင် GTC MP ဌာနမှုး - 5000 မောင်ဥာဏ်လင်းထက်(ဗကသ) - 5000 ဦမြရှိန် - 5000 ========== ယနေ့(31.7.2015အထိ)စုစုပေါင်း 945,000ကျပ် နောက်ထပ် ရက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပြီးတာနဲ့ မအူပင်မြို့ကနေ ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ် စတင်ပါတော့မယ် ။ ရေဘေးဒုက္ခသယ်များအတွက် မိမိတို့ တက်နိုင်သည့်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ။ ။ (( ယခု post ကိုအများသူငှာသိအောင် မျှဝေ ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ရေဘေးသင့်သူများအားကူညီကြပါစို့....))xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8.2.2015ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန် pennisula plaza မှာအလှူငွေများသွား လွှဲ မှာ ပါ ။ အလှူငွေ ထည့်ချင်သူ များရှိရင် နေ့ လည် ၁ နာ ရီ လောက် city hall မှာ ကျွန်တော် တို့ ဆီ လာ ရောက် လှူ နိုင် ပါတယ် ။ တခြား ရေ ဘေး ကြုံ နေ ရ သော နေ ရာ များ အ တွက် လှူ ဒန်း ချင် ရင် အောက် ပါ အ တိုင်း ဆက် သွယ် နိုင် ပါ တယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အခုရေတွေလွှမ်းနေတဲ့နေရာနှင်အကူအညိလိုအပ်နေသော်နေရာများသို့သွားရောက်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ် ... .. အခုအလှူ ငွေတွေကောက်ခံနေပါတယ်ခင်ဗျာ .. သဒ္ဒါတရား နည်းများမဆိုပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..လှူဒါန်းလိုသောညီကိုမောင်နှမများ ပြည့်ဖြိုးကျော်-86250714 ညဏ်ဝင်းမြင့်- +6592728170 Neo - +6590926456 စိုးပိုင်-+6592201019 မင်းစိုး- 86110904 ဘဏ်အကောင့်- "Dbs saving plus -0611003576" သိုပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ . လှူဒါန်းသောငွေပမာဏနှင့်အလှူရှင်နာမည်ကိုဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း smsဖြစ်သော်လည်းကောင်းပေးပို့ပေးပါရန်နိူးဆော်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။(singaproe zero music band)
လယ်တီသိမ်ကိုလီးနဲ့ထိုးဖြိုခဲ့ပြီးပြီနော် သိန်းစိန် ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်း စစ်ဖိနပ်နဲ့နင်း ဆောက်ခွက်ရိုက်ပြီး မီးရှို့ပြီးသွားပြီ။ ၂၀၀၇ မှာတုန်းကလည်း လူတွေသိန်းချီ ရေနှစ်သတ်ပြီး ရွှေဝါရောင်ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်သတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ ကုလားဖြူမယားစုကြည်ကတော့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပါးတစ်ချက်မချဖူးပါဘူး။အခုလည်း သိန်းစိန် လူတွေကိုထပ်သတ်နေပြီ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ စစ်တပ်ကိုမဲပေးမဲ့ကောင်တွေကိုတော့ လီးပဲဟေ့။ စစ်တပ်ကအသက်စွန့်ပြီးတော့ တရုတ်တွေကိုဖမ်းထားရတယ်။ သိန်းစိန်က တရုတ်လီးကိုစုပ်တယ်။ အကုန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ မင်းအောင်လှိုင် မင်းတို့ဇမရှိရင် ဆင်း.။ ငါတို့ အသေခံပြီးတိုက်မယ်။၉၆၉ သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ရွှေရခိုင်တွေရေ မင်းတို့ဆီက သယံဇာတတွေယူပြီး မင်းတို့ကို အရက်သမားဖြစ်အောင် ဘဝတွေဖျက်ခဲ့တာ ကုလားဖြူမယားလား စစ်သားသိန်းစိန်လား။ အခုတော့ အားလုံးရှင်းသွားလောက်ပါပြီ။ သိန်းစိန် ဘဝအဆက်ဆက် အသေဆိုးနဲ့သာ သေပါစေ။ မကျေနပ်တဲ့ကောင် ရီပုိ့လုပ်နိုင်တယ်။ မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ ရင်နာတယ်။မဘသ ကိုယ်တော်တွေ ခွေးလို ဂဲနောက်ကိုလိုက်ကိုက်မလား ဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်ကို ခြသေ့င်္လိုကိုက်မလား။ အမျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရောရင်တော့ အကုန်လုံးဖင်လိုးခံရမှာပဲ။ မမေ့နဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် ဘယ်ဘုန်းကြီးမှ ပါးတစ်ချက်အရိုက်မခံဖူးဘူးနော်။(soeayez)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxအစိုးရရဲ့တော်ချက်ကိုမချီးကျူးပဲကိုမနေနိုင်တာ တခုခုဖြစ်ပြီဆိုယောင်တောင်တောင်ပေါင်တောင်တောင် တော်တော်များများကဝိုင်းပြီးထောက်ပြကြပြီဆိုတော့မှ ထောက်ပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုထလုပ် ပြီးရင် သူကအစောကြီးတည်းကပဲလုပ်နေသလိုလို စဟောင်ပြကြတော့တာပဲ ပြီးရင် သတင်းစာထဲပါလာမယ် အခြေနေတည်ငြိမ်သွားပါပြီပေါ့ အပေါ်ယံလေးတွေနှမ်းဖြူး နောက်ကွယ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်မှု့တွေကျတော့ ကိုယ်တွေပြည်သူအချင်းချင်းပဲ လှူကြထောက်ကြ၊ NGO တွေကလှူကြထောက်ကြနဲ့ ယိုင်တိုင်တိုင်လေးကျန်နေခဲ့တယ် နာဂစ်တုန်းကလည်း ဒီသောက်ချိုးပဲလုပ်သွားတယ် တကယ်ပါ နာဂစ်နယ်မြေဒေသတွေမှာ အခုချိန်ထိ NGO တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေး Project တွေ Development တွေလုပ်နေကြတုန်း အဲဒီအစိုးရက နာဂစ်မှာဆုံးရှူံးသွားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှု့တွေ ဘာတွေကျကျနနပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်ခဲ့လဲ ဒီ NGO တွေပဲ ဟိုးနာဂစ်စဖြစ်တည်းက Emergency Project အခြေနေငြိမ်သွားတော့မှ Recovery Project တွေဆက် နာဂစ်ဖြစ်ပြီးတာ ၇ နှစ်လောက်ရှိပြီ အခုချိန်ထိ Development Project တွေလုပ်ပေးနေလို့ဒီလောက်ထိဧရာဝတီပြန် ထောင်လာနိုင်တာ အဲလိုလုပ်ပေးနေတဲ့ NGO တွေကိုကြတော့ ဖင်ပြောခေါင်းပြော ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင် အဲ့ဒီအစိုးရကလုပ်ပစ်ခဲ့ကြသေးတယ် အစိုးရဘက်ဂျက်နဲ့ ရွာတွေအတွက်ချပေးတဲ့ ပံ့ပိုးမှု့တွေမဖြစ်စလောက်လေးကို မြို့နယ်မှုးကတဆင့်ကြိတ် ကျေးရွာဥက္ကဌကတဆင့်ကြိတ်နဲ့ ခွေးဘုရားပွဲလှည့်တာကြနေတာပဲ NGO တွေက သူတို့လက်ထဲမထည့်ဘူး တိုက်ရိုက်လှူတယ် အဲ့တော့ မြို့နယ်မှုး ကျေးရွာဥက္ကဌအဆင့်က NGO တွေကိုကန့်လန့်လိုက်တိုက်တယ် လှတာပေါ့ဗျာ ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးစား နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမပူးပေါင်းဘဲနဲ့ ငါဘာမှမရရင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုပြီးနေတယ် - ဘယ်လောင်ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်လဲ ဒီကြားထဲ - ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကျကျနန frame တွေချထားတဲ့ NGO Project တွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာတွေက ခိုးစားကြတာ၊ ခိုစားကြတာမြင်နေရသေးတယ် ငါတို့နိုင်ငံ၊ ငါတို့မြို့၊ ငါတို့ရွာအတွက်ပါလားဆိုတဲ့ အသိထည့်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေက NGO မှာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ် အဲဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကိုက ဟိုး ဝန်ကြီး Level ကနေစပြီး အောက်ခြေထိဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်၊ ကိုယ်မြို့အတွက်၊ ကိုယ်ရွာအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ အခုထိမြင်ရခဲလေခြင်းပဲ သူတို့မိသားစုဝမ်းစာသူတို့ကြောင်းနေရုံလေးတွေပဲ အခုလဲကြည့်နေပါ လူပြောလွတ်ပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းဖာမယ် ပြီးရင်ကြောင်တောင်ငုတ်တုတ်ငိုက်မယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Budget တွေဘုံးမယ် မြန်မာနိုင်ငံလေးကတဖြည်းဖြည်းနွမ်းပါးလာခဲ့တာ ကြာပေါ့(myatmin)